SARIMIHETSIKA VAOVAO : Hivoaka tsy ho ela ny horonantsary "Ampamoaka"
Araka ny lahatsoratra izay nivoaka tamin’ny gazety dia hamoaka horonantsary vaovao "Ampamoaka" i Fenitra Hasimbola na Kapôraly Bôby. 21 septembre 2020
Manazava ny antsipiriany momba ilay horonantsary izy. Miompana amin’ny resaka finoana Kristianina moa ity horonantsary ity. " Ny tantaran’ny Baiboly sy tantara Malagasy" no tiana hambara amin’izany. “Manana teny fikasana i Madagasikara, izay nataon’ireo mpaminany taloha ary tanteraka eto amin’ny nosintsika ireo voalaza ao amin’ny "Deteronomia toko faha 28 iray manontolo dia ny ozona rehetra izay mahazo ny Malagasy ankehitriny io noho ny fanitsahana ny didiny sy ny fitsipiny.
Ny Malagasy izay amin’ny maha taranaka voafidy azy izany hoe ny maha Hebreo ny Malagasy dia tokony hanaraka izay rehetra voalaza ao anaty Baiboly dia ho tanteraka eto amin’ny Nosy avokoa. Ireo fitahiana rehetra izay voalaza ao amin’ny Deterenomia io ihany no milaza fa ny vahoaka sy ny mpitondra ary ireo mpitondra fivavahana dia manaiky fa sahirana ny firenena kanefa tsisy vahaolana marina fa mivavaka ihany no atao.
Hatramin’ny fiparitahan’ny fivavahana maro nefa dia samy manana ny finoany ny tsirairay, ka lasa tonga tsy fitovian-kevitra eo amin’ny ray aman-dreny sy ny zanaka ohatra ary misy mihitsy ny tsy mihavana intsony. Araka izany dia i Madagasikara no voafidy araka ireto voalaza manaraka ireto : Isaia toko 66 andininy faha 18-19 sy Isaia toko faha 11-11 ary Isaia 42-10 ary ny farany dia Zefania 3-10."
Ezahina hiparitaka manerana ny Nosy moa ity horonantsary Ampamoaka ity ary Tanjona amin’ny namoahana ity horonantsarimihetsika ity ny mba handinihan’ny olona ny Baiboly.